Isifuba Somoya Esibangelwa Ukuzivocavoca - Ipulatifomu Yesiguli Emhlabeni Wonke Yokungezwani Nomzimba Nomoya
Isifuba Somoya Esibangelwa Ukuzivocavoca: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa Nokuningi
Ikhaya>Siyini Isifo Somoya?>Isifuba Somoya Esibangelwa Ukuzivocavoca: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa Nokuningi
Isifuba Somoya Esibangelwa Ukuzivocavoca: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa NokuningiIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-10T16:54:32+01:00
Uma une-asthma ebangelwa ukuzivocavoca umoya wakho uyacasuka futhi ube mncane ngesikhathi noma uqonde ngemuva kokuzivocavoca, ukuze kube nzima ukuphefumula. Kulezi zinsuku odokotela bavame ukuyibiza ngokuthi 'i-bronchoconstriction' (i-EIB) yokuzivocavoca ngoba ukukhuluma ngokuqinile kuyisimo esihlukile se-asthma, yize izimpawu zifana ncamashi.
Kucatshangwa ukuthi 5-20% wabantu bane-EIB. Kuthinta izingane nabantu abadala kuwo wonke amazinga ezemidlalo. Cishe abantu abayisishiyagalolunye kwabayishumi abane-EIB nabo banesifuba somoya. Kunzima ukwazi ngokuqinisekile ukuthi bangaki abantu abane-EIB ngaphandle kwesifuba somoya ngoba izimpawu azibonakali. Lesi sithombe siphinde sidideke neqiniso lokuthi ukuzivocavoca umzimba kuyimbangela yabanye abantu abane-asthma.
Ngokudabukisayo, izingane ezine-EIB zingaba nekhwalithi enciphile yokuphila nenhlalakahle engokomzwelo.
Isifo se-asthma esibangelwa ukuzivocavoca sibangela nezimbangela
Imbangela ye-bronchoconstriction ebangelwa ukuzivocavoca umoya owomile ophefumulelwa ngesikhathi sokuzivocavoca. Uma uphefumula umoya owomile kunomoya osuvele usemzimbeni wakho, izindlela zakho zomoya ziyaphelelwa ngamanzi, okuholela ekunciphiseni kwemisipha kanye namafinyila amaningi.
Izimbangela ze-asthma ezibangelwa ukuzivocavoca zifaka phakathi:
Ukushisa komoya okuphansi (yize kungahle kube ukuthi umoya obandayo womile kunomoya ofudumele).
Ama-Irritants (ama-allergen) emoyeni, njengokungcola kwemvelo, impova noma, emahholo ezemidlalo asezindlini nasezivocavoca umzimba, amakha, izihlanza, amakhemikhali, upende, okokusebenza okusha noma ukhaphethi.
Izifo zokuphefumula ngegciwane.
Izimpawu nezimpawu ze-asthma zokuzivocavoca
Izimpawu ze-asthma ezibangelwa ukuzivocavoca umzimba ziyafana nezesifuba somoya futhi zifaka:
Umuzwa wokuqina esifubeni sakho
Ukukhiqiza amafinyila amaningi
Uzizwa ungafanelekile yize wazi ukuthi usesimweni esihle somzimba
Ubuhlungu besifuba, noma lokhu kungavamile.
Izimpawu nezimpawu zivame ukuvela ngaphakathi imizuzu emibili kuya kwemihlanu yokuzivocavoca, ifinyelela phezulu ngemuva kwemizuzu eyi-10. Kungakapheli nehora izimpawu zivame ukunyamalala.
Kungenzeka ukuthi ube ne-EIB uma:
Yiba nesifuba somoya esilawulwa kabi
Have i-asthma enamandla
Yiba nesihlobo esiseduze nesifuba somoya noma isifuba
Yiba nokungezwani komzimba nomzimba njenge-hay fever
Ungumdlali osebenza kahle noma okhuthazelayo. Kuze kube ngabantu abayisikhombisa kwabalishumi noma abadlali bezemidlalo abangama-Olimpiki abalinganiselwa ukuthi bane-EIB, kuya ngomdlalo wabo
Ingabe uyingane, ikakhulukazi uma uhlala edolobheni noma edolobheni.
Ungayihlola kanjani i-asthma ebangelwa ukuvivinya umzimba?
Uma ucabanga ukuthi ungahle ube ne-asthma ebangelwa ukuzivocavoca umzimba, kufanele wenze i-aphoyintimenti yokubona udokotela wakho. Udokotela wakho uzokubuza mayelana nezimpawu zakho nokuthi zenzeka nini futhi angasebenzisa ukuhlolwa kokuvivinya umzimba ukuthola ubufakazi bokuthi i-bronchoconstriction. Lezi zinguquko zilinganisa ukusebenza kwamaphaphu akho ngemuva kokuzivocavoca, ngokulandelayo:
Ukuhlolwa kwamaphaphu: usebenzisa i-spirometry ukukala ukusebenza kwamaphaphu akho ngaphambi nangemizuzu emihlanu, 10, 15 kanye nemizuzu engama-30 ngemuva kokuzivocavoca.
Ukuzivocavoca inselelo yokuzivocavoca: ukuqapha ukugeleza kwakho okuphezulu ngaphambi nangemva kokuzivocavoca okujwayelekile - ungacelwa ukuthi uzenzele lokhu emasontweni ambalwa ekhaya.
Olunye uvivinyo lwenselelo: Ungacelwa ukuthi uzivocavoca ngamandla ngaphansi kweso elibukhali ngesikhathi esifanayo nokuphonsela inselelo amaphaphu akho ngokuphefumula umoya owomile ngokusebenzisa i-facemask, ngokuhogela i-methacholine noma nge-hyperventilating. Lokhu kubizwa ukuhlolwa kwe-bronchoprovocation. I-Spirometry izosetshenziselwa ukukala umsebenzi wakho wamaphaphu ngaphambi nangemva kwalokho.
Uma lezi zivivinyo ziqinisekisa ukuvinjelwa kwe-bronchoconstriction, udokotela wakho uzodinga ukunquma ukuthi unayo yini:
i-asthma engalawulwa kahle ebangelwa ukuzivocavoca umzimba
i-asthma elawulwa kahle nge-bronchoconstriction ebangelwa ukuzivocavoca umzimba
ukuvinjelwa komzimba okubangelwa ukuzivocavoca umzimba.
Kukhona ukugqagqana nokungazi kahle kahle kule ndawo. Indlela ophendula ngayo ekwelashweni izonikeza izinkomba zokuxilongwa.
Funda kabanzi mayelana ne sitholakala kanjani isifuba somoya.
Isifuba somoya esibangelwa ukuzivocavoca noma asikho esimeni?
Izimpawu ezifana nalezo zesifuba somoya ezibangelwa ukuzivocavoca umzimba zingadalwa ukuzivocavoca umzimba ungaphandle kwesimo. Udokotela wakho uzokucabangela lokhu ngesikhathi sokuqokwa kwakho kokuqala futhi angaqhuba noma acele ezinye izivivinyo ukukhipha lokhu. Ezinye izimo ezinezimpawu ezifanayo udokotela wakho angazicabangela zibandakanya ukuzivocavoca ngokweqile, izinkinga zezintambo zezwi, izinkinga zokuphefumula, ukukhwehlela okuvamile nezinkinga zenhliziyo.
Uma unesifuba esikhulu lapho uphefumulela ngaphakathi (hhayi ukuphuma), ungahle ube nokuvinjelwa okubangelwa ukuvivinya umzimba (i-EILO). I-EILO ivamile ebusheni futhi abadlali. Ngokungafani ne-bronchoconstriction ne-asthma ebangelwa ukuvivinya umzimba, i-EILO ayiphenduli emithini yokwelashwa yisifuba somoya.
Ingabe kufanele ngiyeke ukuzivocavoca umzimba?
Akufanele uyeke ukuzivocavoca umzimba uma une-bronchoconstriction ebangelwa ukuzivocavoca umzimba. Ukuvivinya umzimba njalo kuyingxenye ebalulekile yempilo enempilo futhi kunezinzuzo eziningi, ikakhulukazi uma une-asthma. Cela iseluleko kudokotela wakho ngokuthi ungazivocavoca kanjani umzimba futhi uphathe izimpawu zakho.
Ukuzivocavoca kwabantu abane-asthma
Okunye ukuzivocavoca nemidlalo kungcono kuwe kunezinye uma une-bronchoconstriction noma i-asthma yokuzivocavoca. Imisebenzi edinga ukuqhuma kwamandla amancane ayinamathuba amaningi okudala izimpawu, njenge:
Izintaba nokuhamba ngezinyawo
Ikhilikithi noma i-baseball.
Kungcono ukugwema ezemidlalo ezifuna ukuzikhandla okuqhubekayo, njenge:
Ibhola / ibhola
Imidlalo yasebusika ingaba inselele ikakhulukazi futhi ibangele izimpawu ngenxa yokubanda, umoya owomile ngaleso sikhathi sonyaka - ukushibilika eqhweni, ukushibilika eqhweni, ukushibilika eqhweni, i-ice hockey njll.
Ukubhukuda kungaba kuhle ngoba indawo efudumele nenomswakama ayicasuli imigwaqo yomoya. Noma kunjalo ungakuthola lokho i-chlorine noma ezinye izithasiselo zamanzi zingadala izimpawu zakho ngakho zama amachibi ahlukene uma lokho kukuthinta.
Udokotela noma umhlengikazi wakho angakweluleka ngezindlela ezingcono kakhulu zokuphatha izimpawu zakho lapho uzivocavoca. Lokhu kungafaka ukusebenzisa i- izivivinyo zokuphefumula noma ukugwema ukuzivocavoca ezimweni ezithile zezulu.
Uma une-asthma eyedlulele ngokuzivocavoca umzimba, udokotela wakho noma umhlengikazi wesifuba somoya uzohlola ukuthi uthatha imithi yakho yokuvimbela i-asthma njalo nangendlela efanele ye-inhaler. Ukuphatha i-asthma yakho ngokufanele ukuze ilawulwe kahle kube yikho konke okudingekayo ukugwema izinkinga lapho uzivocavoca umzimba.
Uma usathola izimpawu lapho uzivocavoca uzonikezwa umuthi wesikhashana wokunciphisa ngaphambi kokuzivocavoca.
Uma une-bronchoconstriction (i-EIB) ebangelwa ukuvivinya umzimba ngaphandle kwesifuba somoya - okungukuthi, awunazo izimpawu zesifuba somoya nganoma yisiphi esinye isikhathi - umuthi wokuzikhethela wokuqala i-reliever inhaler yesikhashana okumele uyisebenzise ngokushesha ngaphambi kokuba uqale ukuzivocavoca. Ungahle ungadingi isivikeli sansuku zonke.
Le mithi elandelayo yesikhashana neyesikhathi eside ikhonjisiwe ukuvikela ngempumelelo ekulweni nesifuba somoya noma i-EIB.
Abadlali be-beta-2-agoists abasebenza ngaphakathi (SABA) bangama-bronchodilator asebenza ngokushesha futhi agcina izimpawu zikhona amahora amabili kuya kwamane. Thatha imizuzu engu-15 kuya kwengu-30 ngaphambi kokuzivocavoca umzimba futhi njengoba kudingeka.
Ngenye indlela inhlanganisela ye-beta-2-agoistist (LABA) esebenza isikhathi eside ne-corticosteroid ingahogela imizuzu engama-30 kuye kwengu-60 ngaphambi kokuzivocavoca. Lokhu kufanele kuvimbele izimpawu kuze kube ngamahora ayi-12. Ungathatha lokhu kanye kuphela esikhathini samahora ayi-12.
Imithi yesikhathi eside
I-inhalled corticosteroids (anti-inflammatories) - isetshenziswa nsuku zonke ukunciphisa ukuvuvukala nokuzwela kwezindiza, ngakho-ke ukuvimbela izimpawu ze-EIB.
I-leukotriene receptor antagonist (i-LTRA) ingathathwa ngendlela yethebhulethi yansuku zonke ukuvimbela izimpawu ezihambisana nokuzivocavoca umzimba.
I-Theophyllines - isivikelo sethebhulethi yansuku zonke.
I-sodium cromoglycate noma i-nedocromil sodium - isivikelo sethebhulethi yansuku zonke.
Unganciphisa noma uvimbele izimpawu ze-asthma ezibangelwa ukuvivinya umzimba kuwe noma enganeni yakho ngokulandela iseluleko esingezansi:
Zifudumeze kamnandi cishe imizuzu eyi-15 ngaphambi kokuqala ukuzivocavoca umzimba futhi uhlale upholile ngemuva kwalokho
Esimweni sezulu esibandayo, vala ikhala nomlomo ngesikhafu noma ngefemask ukuvikela amaphaphu akho emoyeni obandayo
Phefumulela ngamakhala akho ukufudumeza nokuswakalisa umoya obandayo ngaphambi kokuthi ushaye amaphaphu akho
Uma une-asthma eyisisekelo igcine ilawulwa kahle ngaso sonke isikhathi futhi uqinisekise ukuthi unohlelo lwesenzo se-asthma olusesikhathini samanje
Gwema izinto ezibangela wena noma udokotela wakho - ungadinga ukushintsha umdlalo wakho noma lapho uzivocavoca khona umzimba
Gcina irekhodi lokuthi uyisebenzisa kangaki i-SABA inhaler yakho futhi ubuyekeze lokhu nodokotela wakho noma umhlengikazi wesifuba somoya njalo (okungenani kanye ngonyaka)
Uma ingane yakho ine-EIB, tshela othisha nabanakekeli be-PE ngokubaluleka kokuzifudumeza, izimpawu ze-EIB nokuthi ingane yakho kufanele iyisebenzise kanjani i-inhaler yayo
Abanye abantu bancoma nokuthatha uvithamini C novithamini E izithako zokudla. Kodwa-ke abukho ubufakazi obanele bokuthi lezi zinomphumela omuhle ku-asthma noma ku-bronchoconstriction ebangelwa ukuvivinya umzimba.